Ndị Ọrụ Ugbo United States Jiri AM maka Ngwá Ọrụ Mmezi Ọhụrụ
Ọzọkwa ndị agha America na-atụgharị na mmepụta mgbakwunye (AM) maka ngwa ọhụụ iji nyere ha aka n'ọhịa. Oge a, Marine Corps System Command's (MCSC) Advanced Manufacturing Operations Cell (AMOC) enyerela aka mepụta ngwaọrụ 3D na-ebu ígwè nke mwepụ m ...
Ihe Ntinye 3D na World of Music
June 21st bu Fête de la Musique (nke a makwaara dika World Music Day), emume mba uwa nke n’eme ka ndi nka nwee ohere igha n’okporo uzo gosiputa egwuru egwu ha. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya na ụlọ ọrụ egwu, mbipụta 3D gosipụtara ọtụtụ ikike ka ọ na-enye ihe ...
E-Scooter E Bipụtara Nke 3D Nke Mbụ Worldwa
E-scooters abụwo okwu na-ese okwu kemgbe iwebata ha na nnukwu obodo. Echiche dịgasị iche iche, ọkachasị ma a bịa n’ihe nkwado. N'ezie, ndị e-scooters nwere ike ịdị na gburugburu ebe obibi - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha edochi njem ụgbọ ala ma ọ bụ ụdị ụgbọ njem ndị ọzọ. A na-amụ site na ...
RMIT Research Team meputara uzo ohuru maka imepụta ihe eji eme ihe site na iji ihe ndi ozo na ogwu ogwu
Na Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), otu ndị na-eme nchọpụta, yana ndị dọkịta si St Vincent's Hospital dị na Melbourne, ewepụtala usoro ọhụụ maka itinye ọgwụ na-agbanwe agbanwe. Kama imepụta scaffolds nke mkpụrụ ndụ ga-amụba, ha 3D ebipụta ...
Sakuu na-ekwuputa mbido 3D Printing Platform iji mee batrị steeti siri ike
Nwere ike iche n'echiche igwe okwu AM nke nwere ike 3D bipụta batrị ụgbọ ala eletrik gị? Nke a bụ nrọ nke ụlọ ọrụ America Sakuu - nke bụbu KeraCel - nwere olile anya inweta site na njedebe nke 2021. Na mmekorita ya na Musashi Seimitsu Industry, ọ chọrọ ịkepụta batrị steeti siri ike (SSBs) site na mgbakwunye ma ...
GE Aviation na-agbanye Metal AM maka akụkụ anọ, ụgwọ Cutcha 35%
Nwepụta ihe mgbakwunye nwere ike dochie mgbatị ọdịnala na mpaghara ụgbọelu? GE yiri ka ọ na-eche otú ahụ. Mmekọrịta dị n'etiti GE Aviation na GE Additive akpaliwo onye nrụpụta ka ọ gbanwee site na ntinye ego ya na nrụpụta ihe mgbakwunye (AM) maka akụkụ ikuku ikuku anọ maka ...
OECHSLER Rethinks Ski Mask Design na 3D obibi
Na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ na-ahụ uru dị n'iji mbipụta 3D n'egwuregwu. Companylọ ọrụ ọzọ abanyela mgbanaka ahụ. German ụlọ ọrụ OECHSLER, bụ ọkachamara na mmepe na imepụta ngwaahịa na usoro teknụzụ dị elu, tụgharịrị uche na nhazi na mmepụta nke ski ...
3D E Bipụtara Smart Buoys maka nlekota Mmiri gburugburu
Dika ubochi taa bu ubochi mmiri nke uwa, anyi n’eji ohere igwa gi banyere mmiri batrị nke etinyere, nke etinyere n’ime ya, nke eji eme onu ahia ka ichoputa ma nchikota data banyere mmiri. Emepụtara ihe ndị a dị ka akụkụ nke Project 2020 Vitality Project nke ndị Ulsa duziri ...